काठमाडौं, ५ कात्तिक । न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडको आईपीओ बाँडफाँड भएको छ ।
धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको काठमाडौं नक्सालस्थित कार्यालयमा बिहान ९ बजे आयोजित कार्यक्रमबीच आईपीओ बाँडफाँड गरिएको हो। मागभन्दा बढी आवेदन परेका कारण आईपीओ गोलाप्रथाबाट बाँडफाँड गरिएको छ।
यो आईपीओमा कुल २२ लाख ५५ हजार ८४ आवेदकबाट २ करोड ७० लाख ८९ हजार १५० कित्ता सेयर माग भएको थियो। जसमा १३ हजार ९४६ आवेदकबाट माग भएको कुल १ लाख ८४ हजार ७० कित्ता सेयर बदर भएको छ।
क्यापिटलका अनुसार २२ लाख ४१ हजार १३८ आवेदकबाट परेको २ करोड ६९ लाख ५ हजार ८० कित्ता सेयरमात्र सदर भएको छ। सदर आवेदकमध्ये २ लाख ९ हजार २५० आवेदकले गोलप्रथाबाट १० कित्ताका दरले सेयर पाएका छन्।
आईपीओको नतिजा कम्पनीको वेबसाइट, बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटलको वेबसाइट, सिडीएससीको मेरो शेयर र सिडीएसको नयाँ वेबसाइटबाट हेर्न सकिने छ । जस अनुसार न्यादी हाइड्रोपावरको वेबसाइट https://nhl.com.np/ , बिक्री प्रबन्धक ग्लिोबल आईएमई क्यापिटलको वेबसाइट https://www.globalimecapital.com/ , सिडीएससीको मेरो शेयरको वेबसाइट http://meroshare.cdsc.com.np र सिडीएसले आईपीओको लागि संचालन गरेको वेबसाइट http://iporesult.cdsc.com.np बाट हेर्ने सकिने छ ।
सामलिङ्ग पावरको खुल्यो आईपीओ
काठमाडौं, ४ कात्तिक । सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेडको आईपीओमा आवेदन खुला भएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० अंकित मूल्यका ७ लाख ३० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको हो। कुल कित्तामध्ये २ प्रतिशत अर्थात १४ हजार ६०० कित्ता सेयर कर्मचारीका लागि र ५ प्रतिशत अर्थात् ३६ हजार ५०० कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ। बाँकी ६ लाख ७८ हजार ९०० कित्तामा सर्वसाधारणले आवेदन दिन पाउनेछन्।
आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतममा २० हजार कित्ता सेयर खरिदका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ। आईपीओको निष्कासन बन्द छिटोमा कात्तिक ८ गते र ढिलोमा कात्तिक १८ गते बैंकिङ समयपछि हुनेछ।
कम्पनीको धितोपत्र बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेको छ।
काठमाडौं, २४ असोज । साताको पहिलो दिन आइतबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुन आज तोलामा १ सय रुपैयाँले बढेको हो । छापावालाल सुन आज नेपाली बजारमा प्रतितोला ९० हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै तेजावी सुन आज प्रतितोला ९० हजार २ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
यता चाँदी आज तोलामा ५ रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ११ सय ७५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
सहुलियतमा खसीबोका बिक्री शुरु
काठमाडौं, २३ असोज । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले शनिबारदेखि दशैं तिहार लगायतका चाडपर्वका लागि खसीबोका बिक्री शुरु गरेको छ।
असोज १ गतेदेखि नै सहुलियत पसलमार्फत खाद्यान्न बिक्री शुरु गरेको कम्पनीले शनिबारदेखि काठमाडौंमा खसीबोका बिक्री शुरु गरेको हो। थापाथलीस्थित कार्यालयबाट खसीबोकाको बिक्री शुरु गरिएको हो।
यस वर्ष दशैंका लागि २ हजारको हाराहारीमा खसीबोका बिक्री गर्ने तयारी गरेको कम्पनीले च्यांग्रा भने बिक्री नगर्ने बताएको छ।
यस वर्षका लागि कम्पनीले खसीबोकाको मूल्य प्रतिकिलो ६५० निर्धारण गरेको छ भने प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुटको व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार खसीबोकाको मूल्य प्रतिकिलो ६४० पर्ने कम्पनीले जनाएको छ।
बुद्धभूमि नेपालको आइपीओ बाँडफाँट
काठमाडौं, २२ असोज । बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावरको आइपीओ शुक्रबार बाँडफाँट भएको छ । गोलाप्रथामार्फत ७४ हजार ४०० जना सर्वसाधारणले १० कित्ताका दरले सेयर पाएका छन् । कुल २० लाख ३० हजार ९९५ जनाले आवेदन दिएकामा १६ हजार ३३ जनाको आवेदन रद्द भएको थियो । रितपूर्वक आवेदन दिएका २० लाख १४ हजार ९२२ जनालाई गोलाप्रथामा सहभागी गरिएको थियो ।
कम्पनीले कुल ८ लाख कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गरेको थियो । यसमध्ये ५५ अर्थात् ४० हजार कित्ता सामुहीक लगानी कोष र २५ अर्थात् १६ हजार कित्ता सेयर कर्मचारीहरुका लागि छुट्याइएको थियो । बाँकी ७ लाख ४४ हजार कित्ता सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिएको हो ।
काठमाडौं, १७ असोज । साहस उर्जा लिमिटेडको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) बाँडफाँड भएको छ । कम्पनीको आईपीओको बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटलको कार्यालयमा आइतबार शेयर बाँडफाँड भएको हो ।
धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका२०७४ बमोजिम कम्पनीको आईपीओ शेयर गोलाप्रथाबाट ६ लाख ४४ हजार जना आवेदकले १० कित्ताका दरले पाएका छन् भने ११ हजार ९९६ जनाको आवेदन रद्द भएको छ ।
आईपीओमा २३ लाख ९५ हजार ४५६ जनाले आवेदन दिएकोमा २३ लाख ८३ हजार ४६० जनाको आवेदन मात्र सदर भएको बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटलले बाँडफाँड कार्यक्रममा जानकारी दिएको छ । सदर आवेदनमार्फत कुल ३ करोड १३ लाख ६१ हजार २३० कित्ता शेयर माग भएको थियो । रद्द भएको ११ हजार ९९६ वटा आवेदन मार्फत १ लाख ७९ हजार ७७० कित्ता शेयर माग भएको थियो ।
न्यादी हाइड्रोपावरको आईपीओमा आवेदन खुला
काठमाडौं, १५ असोज । न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडको रु. २२ करोड ५० लाखको आईपीओमा आज (असोज १५ गते) बाट आवेदन खुला गरिएको छ। कम्पनीले १०० अंकित दरका कुल २२ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको हो। कुल कित्तामध्ये २ प्रतिशतले हुन आउने ४५ हजार कित्ता कर्मचारीका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने ५ प्रतिशतले हुन आउने १ लाख १२ हजार ५०० कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ। बाँकी २० लाख ९२ हजार ५०० कित्तामा सर्वसाधारणले आवेदन दिन पाउनेछन्।
न्यादी हाइड्रोपावरको आईपीओमा सर्वसाधारणले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतममा ५० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ। नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि–आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थारु र तिनका शाखा कार्यालयका साथै मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सकिनेछ। यो आईपीओको निष्कासन बन्द छिटोमा असोज १९ गते र ढिलोमा असोज ३१ गते बैंकिङ समयपछि हुनेछ।
महिला चेम्बरको आयोजनामा असाेज १४ गते देखी दशै बिशेष व्यापार मेला शुरु हुने
काठमाडौं, १२ असोज । नेपाल चेम्बर अफ कमर्श अन्तर्गतको नेपाल महिला चेम्बरले अति महत्वको चाडबाड दशैलाई लक्षित गरि यहि आश्विन १४ गते देखी दशै बिशेष व्यापार मेला संचालनमा ल्याउने भएको छ । उक्त मेला देशको राजधानी काठमाडौंको कमलपोखरी स्थित सिटी सेण्टरमा संचालनमा आउन लागेको हो । मेलामा स्वदेशमा उत्पादित कृषिजन्य उत्पादन र अन्य उपभोग्य वस्तुहरु बिक्रीका लागि राखिनेछ ।
जस अन्तर्गत ढाका, उनी, पश्मिना, आभुषण, हेम्प र अर्गानिक, हर्बल, लत्ता कपडा, फूटवेयर, अर्गानिक चिया एवम् कफी, फ्रेगमेण्टेड क्याण्डल, फेस पेंण्टिङ् आदी सम्बन्धी वस्तुहरु रहने छन् । आम उपभोक्ताको सहजतालाई ध्यानमा राख्दै मुख्य रुपमा नेपाली महिला उद्यमीहरुबाट उत्पादित स्वदेशी वस्तुहरुको प्रबर्धन गर्ने उदेश्यका साथ मेला आयोजनामा आउन लागेको जानकारी नेपाल महिला चेम्बरकी अध्यक्ष उर्मिला श्रेष्ठले जानकारी दिएकी छिन् । सिटी सेण्टर एशोसियसन पार्टनर रहेको यस मेलाको प्रबर्धन साझेदारमा सोचेको डटकम र मिडिया साझेदारमा सरोकार टिभी रहेको महिला चेम्बरकी महासचिव लिमा अधिकारीले जानकारी दिएकी छिन्।
दसैँका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला , कहाँको भाडा कति ?(सूचीसहित)
काठमाडौं, ११ असोज । सरकारले साेमबारबाट सार्वजनिक यातायातको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरेकाे छ । यातायात व्यवस्था विभागले दसैँ मान्न घर जाने यात्रुका लागि आजबाट सार्वजनिक यातायातको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय यातायात व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र ट्राफिक प्रहरीसँग विभागमा भएको बैठकपछि लिइएको हो।
अग्रिम टिकट बुकिङ खुला हुने भएपछि सरकारले यसअघि समायोजन गरेको भाडादर नै कायम गरेको छ। सरकारले गत असारदेखि सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा समायोजन गरेको छ। यात्रुवाहक सवारीको भाडा २८ प्रतिशतले बढाइएको भए पनि अन्तर प्रदेशको भाडा समायोजन लागू हुन सकेको थिए। हाललाई सोही समायोजित भाडादर लागू हुने विभागले जनाएको छ।